आईपी ​​वार्म: यो नयाँ वार्मिंग अनुप्रयोगको साथ तपाईंको नयाँ प्रतिष्ठा निर्माण गर्नुहोस् Martech Zone
आईपी ​​वार्म: यो नयाँ वार्मिंग अनुप्रयोगको साथ तपाईंको नयाँ प्रतिष्ठा निर्माण गर्नुहोस्
शुक्रबार, डिसेम्बर 25, 2020 शुक्रबार, डिसेम्बर 25, 2020 Douglas Karr
यदि तपाईंले महत्त्वपूर्ण आकारको ग्राहक आधार पाउनुभयो र नयाँ ईमेल सेवा प्रदायक (ESP) मा सर्नुपर्‍यो भने, तपाईंले सायद आफ्नो नयाँ प्रतिष्ठा बढाउने पीडा भोग्नु भएको छ। वा नराम्रो ... तपाईंले यसको लागि तयारी गर्नुभएन र तुरुन्तै आफुलाई केही समस्याहरू मध्ये एकमा समस्यामा फेला पार्नुभयो:
तपाईंको नयाँ ईमेल सेवा प्रदायक एक उजूरी प्राप्त भयो र तुरून्त तपाईंलाई अतिरिक्त ईमेल पठाउन रोक्दछ जब सम्म तपाईंले मुद्दा हल गर्नुहुन्न।
ईन्टरनेट सेवा प्रदायक वा प्रतिष्ठा-निगरानी सेवाले तपाईंको आईपी ठेगाना चिन्न सक्दैन र तपाईंको बल्क अभियानलाई ब्लक गर्दछ।
ईन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग तपाईंको नयाँ आईपी ठेगाना र तपाईंको ईमेलको सबै जंक फोल्डरमा रुटको लागि प्रतिष्ठा हुँदैन।
दायाँ खुट्टाको साथ सुरु गर्दै आईपी ​​वार्मिंग रणनीति महत्वपूर्ण छ जब नयाँ ईमेल सेवा प्रदायकमा सार्न। अधिकांश ईमेल सेवा प्रदायकहरूले यसको बारेमा धेरै ठूलो सम्झौता गर्दैनन् ... तिनीहरूले भर्खरै तपाइँलाई तपाइँको नयाँ IP ठेगाना न्यानो बनाउन सम्झाउँछन्। उच्च परिणामहरूको लागि, यद्यपि यो साधारण कार्य होईन।
तपाईको पहिलो पठाउनेमा तपाई कुनै जोखिम लिन चाहनुहुन्न, त्यसैले तपाईको ग्राहकलाई तपाईको सब भन्दा व्यस्त ग्राहकहरुमा विभाजन गर्न महत्वपूर्ण छ। यदि कसैले महिनौंमा कहिल्यै खोलेन वा ईमेलमा क्लिक गरेको थिएन भने ... तपाईं सायद तिनीहरूलाई आफ्नो आईपी वार्मिंग अभियानमा राख्न चाहनुहुन्न।
लगभग सबै ग्राहक डेटाबेस खराब ईमेल ठेगानाहरू र स्प्याम जाल ईमेल ठेगानाहरू छन् कि ती कहिल्यै हटाइएको छैन वा सफा नगरिएको छ। आईपी ​​वार्मिंग अभियान पठाउनु भन्दा पहिले तपाईले यी ईमेल ठेगानाहरूलाई तपाईको डेटाबेसबाट सफा गर्न चाहानुहुन्छ।
प्रत्येक ISP सँग उनीहरूसँग समयको साथ प्रतिष्ठा निर्माण गर्न सुरु गर्न ईमेल ठेगानाहरूको एक अनुकूलित मात्रा छ। उदाहरण को लागी, गुगल चाहान्छ कि तपाइँ पहिले थोरै रकम पठाउन चाहानुहुन्छ, र समयसँगै राशि बढाउनुहोस्। नतिजाको रूपमा, तपाई सावधानीपूर्वक सेग्मेंट र आफ्नो अभियानको योजना बनाउनु पर्छ।
सयौं ग्राहकहरूको लागि सफल आईपी वार्मिंग रणनीतिहरूको डिजाईन र विकास पछि, मेरो साझेदार र म Highbridge प्रक्रिया सरल बनाउन गत बर्षमा हाम्रो आफ्नै सेवा विकास गर्ने निर्णय गर्यो। आईपी ​​वार्मका सुविधाहरू:
क्लिनिंग - बाउन्स, अस्थायी ईमेल ठेगानाहरू, र स्पाम जाल न्यून गर्नका लागि उपभोक्ता डेटा को पूर्व सफाई। हामी विकसित अभियानहरूमा यी रेकर्डहरू दबाउछौं र तपाईंको स्रोत अभिलेखहरू अपडेट गर्न डाटा फिर्ता गर्छौं।
प्राथमिकता - हामी अधिक सक्रिय ग्राहकहरु पहिलो आईपी वार्मिंग अभियान पठाइएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न कम्पनी संग उनीहरूको संलग्नताको आधारमा ग्राहकहरुलाई प्राथमिकता।
डोमेन खुफिया - अधिकांश आईपी वार्मिंग सिफारिशहरू केवल आईएसपी द्वारा तपाईंको ईमेल पार्स गर्न बताउँछ; यद्यपि त्यो ईमेल ठेगानाको डोमेन अवलोकन गर्न सजिलो छैन। हामी वास्तवमा डोमेनलाई सुल्झाउछौं र तिनीहरू कुन सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्नेमा बौद्धिक ज्ञान छ अभियानहरूलाई अनुकूलित गर्न। यो B2B कम्पनीहरूसँग महत्वपूर्ण छ जो मुख्य रूपमा व्यावसायिक डोमेनहरूमा पठाउँदै छन् र खास उपभोक्ता ईमेलहरू होइन।
तालिका - हामी तपाईंलाई अभियान सूचि र सिफारिश पठाइएको तालिका फिर्ता गर्दछौं ताकि तपाईं सुची सजिलैसँग आयात गर्न सक्नुहुनेछ र पठाउनको लागि तालिका बनाउँनुहोस्। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको अभियानको डिजाईन र प्रेषकहरूको समय तालिका हो।
के तपाइँ साझा नयाँ आईपी ठेगाना मा तपाइँको नयाँ ESP संग प्रवासन गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि तपाईं सानो ईमेल मार्केटर हुनुहुन्छ भने जुन नयाँ ईमेल सेवा प्रदायकको साथ साझेदारी गरिएको आईपी ठेगानामा सर्दै छ, सफाइ र अभियान तयारी जुन हामी तपाईंको लागि गर्छौं तपाईंलाई समस्याबाट जोगाउने छ।
आईपी ​​तातो रोडम्याप
हामी प्लेटफर्म बढाउने काम गर्दैछौं डाटा कनेक्टिटरहरूको साथ र एपीआई मार्फत निर्धारित प्रेषणहरू पनि ताकि कम्पनीहरूले थोरै गरे पनि। यस बिन्दुमा, यो प्राय जसो ब्याक-एन्ड सेवा हो - तर हामी अगाडि-अन्त र यी बृद्धिमा स्थिर रूपमा काम गर्दैछौं।
यदि तपाईं नयाँ ईमेल सेवा प्रदायकमा सार्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्लेटफर्म प्रयोग गर्नका लागि अब उत्तम समय छ किनकि हामी हाम्रा ग्राहकहरूको साथ थप सहयोगी र असाध्यै ह्यान्ड्स-अन गर्दै छौं!
IP वार्मको साथ सुरू गर्नुहोस्
खुलासा: म यसका साथी हुँ आईपी ​​वार्म.
टैग: समर्पित आईपीईमेल वितरणयोग्यताईमेल प्रतिष्ठाईमेल सेवा प्रदायकespआईपी ​​प्रतिष्ठाआईपी ​​तातोआईपी ​​वार्मिंग अनुप्रयोगआईपी ​​वार्मिंग सेवासाझा आईपी
महामारीको समयमा डिजिटल वालेट दत्तकको उदय